အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများ | USAHello ထံမှနိုင်ငံသားအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာချင်ပါနဲ့? အမေရိကန်နိုင်ငံသားအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အမှန်သည်ဆိုပါကသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဟုခေါ်သည် အဖြစ်ပြောင်းလဲ. သဘာဝအများအပြားခြေလှမ်းများရှိပါတယ်, ထိုသို့ရှည်လျားခက်ခဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. သင်ခြေလှမ်းများကတဆင့်သွားပါအဖြစ်, အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်!
သူတို့ရေခြားမြေခြားခရီးသွားသည့်အခါအမေရိကန်အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်. သင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကူညီနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင်အမေရိကန်သံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုသွားနိုင်ပါတယ်.
အမြဲတမ်းနေထိုင်သူခရီးသွားစည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိထားပါရန်ရှိသည်. သူတို့ဟာနယ်စပ်တလျှောက်မှာမေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူတွေဟာလျှင်မူကားဘယ်သူမှသင့်ရဲ့ညာဘက် re-ဝင်ယူအက်စ်အေငြင်းပယ်နိုင်ပါတယ်.
အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်, သငျသညျရုံးရွေးကောက်တင်မြှောက် Holdings နိုင်ပါတယ်. Nature နိုင်ငံသားများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မှလွဲ. မည်သည့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရုံးများအတွက် run နိုင်ပါတယ်. သမ္မတကို USA တွင်မွေးဖွားခံရဖို့ရှိသည်.
သူတို့က USA တွင်အသက်ရှင်ဖို့မိသားစုဝင်တွေရောက်စေဖို့လိုတဲ့အခါနိုင်ငံသားများအမြဲတမ်းနေထိုင်သူကိုကျော်ဦးစားပေးရ.
သင်၏သားသမီးအောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် 18 နှင့် USA တွင်နေထိုင်သူ, သငျသညျခံယူကြသောအခါထိုသူတို့အလိုအလျှောက်နိုင်ငံသားများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ.
အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းယခု USAHello ဖြစ်ပါသည်.
လူတိုင်းဥပဒေအောက်မှာ USA တွင်အချို့သောအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်. သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများလူတို့တွင်သင်တို့ကိုပိုပြီးအခွင့်အရေးကိုရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ. ဥပမာ:
သငျသညျမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည် - လေ့လာသင်ယူ USA တွင်မဲပေးပုံကို.
ထွက်ရှာတွေ့ - သင်ဖက်ဒရယ်ကောလိပ်အကူအညီများပိုင်ခွင့်ရှိသည် ကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားဖို့ဘယ်လို.
သငျသညျ Medicare ပိုင်ခွင့်ရှိသည် - အကြောင်းကိုဖတ်ပါ USA တွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု.
အစိုးရအလုပ်အကိုင်များကိုမကြာခဏပိုပြီးလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အထက်ပေးဆောင်နေကြ. ဤရွေ့ကားအစိုးရအလုပ်အကိုင်များအမေရိကန်စီးပွားရေးဟာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. သို့သော်များစွာသောအစိုးရအလုပ်အကိုင်များသာနိုင်ငံသားများမှပွင့်လင်းကြသည်. သငျသညျနီးပါးအမြဲဖက်ဒရယ်အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်ရှိသည်.
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတော်များများအလုပ်ရှင်များလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားများမှ preference ကိုပေးတော်မူမည်. အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာအဲဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအလုပ်အကိုင်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်. ခြုံကြည့်သော်, အမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့် ပတ်သက်. ဝင်ငွေ 9% အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုပြီး.
သငျသညျအဟောင်းများကိုသို့မဟုတ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ကြပါလျှင်, အချို့သောအစိုးရအကျိုးကျေးဇူးများကိုနိုင်ငံသားများအဘို့အာမခံထားပါသည်. သငျသညျထကျပိုအဘို့ဤအကြိုးခံစားခှငျ့မခံမယူစေခြင်းငှါ7နှစ်ပေါင်းသင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားမဟုတ်ပါလျှင်. အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ အများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်.
ယူအက်စ်အေကလူကို dual လူမျိုးပေါင်းစုံကျင်းပရန်ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်မရရှိသမျှသည်အခြားသောနိုင်ငံများကလုပ်ပေး. ဥပမာ, သငျသညျတရုတ်ထံမှမူလကလျှင်, အိန္ဒိယ, မြန်မာ, သို့မဟုတ်နော်ဝေ, သငျသညျကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အကျိုးကျေးဇူးများရရန်သင့်နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါနေသော Learn မ dual-နိုင်ငံသားအဖြစ်ခွင့်ပြုမနိုင်ငံများတွင်.
The New အမေရိကန်တွေကင်ပိန်း
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ Immihelp, အဆိုပါ နယူးအမေရိကန်တွေကင်ပိန်း နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.